Top 3 Samsung Softwares File Transfer
Android ayaa macno ahaan ay la wareegeen suuqa mobile ay noqotay madal ay kaliya ee inta badan shirkadaha soo saarka mobile. Samsung waa saaraha keentay in la sii daayo qalabka ay la preloaded Android. Waxaa jira biilasha kala iibsiga file Samsung badan ee suuqa taasoo u fududaynaysa dadka isticmaala si ay u maareeyaan files ee telefoonada iyo kiniiniyada Samsung ay. Ka dib markii hogaanka u qiimeeyo Samsung Softwares kala iibsiga file.
1. Samsung Kies
2. Wondershare MobileGo for Android
3. Wondershare MobileTrans
1. Samsung Kies - Samsung file kala iibsiga
Samsung Kies , soo saartay Shirkadda Samsung, waa Samsung software wareejinta xogta lacag la'aan ah. Iyada oo ay caawinaad, dadka isticmaala Samsung wareejin karaan music, sawiro, video, iyo in ka badan oo ka telefoonada Samsung oo kiniin ah oo lacag la'aan ah.
Bedelka music, videos, sawiro, xiriirada iyo ka badan oo ka mid qalab Samsung ku kale sii;
Dhaqaaq music, sawiro, xiriirada iyo videos dhexeeya qalab Samsung iyo kombiyuutarka;
Xiriirada nidaameed, hawsha, qoraal iyo jadwalka la Muuqaalka;
Kaabta iyo soo celinta xiriirada, abuse wac, fariimaha, music, videos, qoraal, info account email, sawiro, S Planner iyo tixraaca,
Qasaarooyinka: Ma taageeri lahaayeen barnaamijyadooda wareejinta.
2. Wondershare MobileGo for Android - Samsung software kala iibsiga
Dadka galay muusig iyo cajallado fiidyow, SMS iyo barnaamijyadooda, sida xaqiiqada ah waa jeclaan doonaa tan Samsung software xogta mobile kala iibsiga - ka Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Waxaa si buuxda la jaan qaada dhamaan qalabka Samsung sameyn kara waxa Samsung Kies ma sheegi karo. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u maareeyaan wixii ay Samsung leh ama cable USB aan.
Wondershare MobileGo - One Stop Xalka in Maamul-nololeedka Your Mobile
Mid ka mid ah click inaad kala soo baxdo, maareeyaan, soo dejinta & dhoofin aad music, sawiro iyo videos
Bedelka oo dhan ama xiriir la doortay, SMS, barnaamijyadooda, sawiro, videos iyo music u dhexeeya telefoonada Samsung iyo murriyado,
Chine ee kaabta, xiriirada, jadwalka taariikhda, abuse call oo SMS ka qalab Samsung in computer ka iyo soo celiyo ee 1 click;
Abaabulaan xiriir: edit, soo dejinta dhoofinta,,
Hel ama SMS ka kombiyuutarka mid ama ka badan dadka u soo diri;
Ku rakib, dhoofinta, uninstall iyo share barnaamijyadooda si fudud;
Jiid oo hoos u sawiro, videos iyo music ka qalab Samsung in kombiyuutarka, iyo qeybsanaan;
Samsung ka sokow, waxa ay taageertaa LG, HTC, Sony, Motorola, Google iyo qalab Android dheeraad ah.
Ma taageeri taageerto kor u note, qoraal iyo xisaab email qalabka Samung.
3. Wondershare MobileTrans - Samsung wareejinta xogta
Sida ay magaceeda soo jeedisay, ee Wondershare MobileTrans waa software ah kala iibsiga file Samsung. Waxaa la socon kara telefoonada badan Samsung iyo kiniiniyada. Waxa uu awood u leeyahay si ay u gudbiyaan xiriirada iyo macluumaad dheeraad ah oo u dhexeeya Samsung qalab, Nokia (Symbian) telefoonka iyo iDevice la click hal.
Features Muhiimka ah:
Xiriirada Transfer, barnaamijyadooda, videos, abuse wac, music, SMS iyo sawiro dhexeeya qalab Samsung iyo telefoonada kale Android;
Dhaqaaq music, videos, xiriirada, SMS iyo sawiro dhexeeya qalab Samsung oo iPhone, iPad iyo iPod Touch, oo dhowaan ay taageerayaan macruufka 9, iPhone 6S Plus, iPhone 6S;
Copy xiriirada, music, SMS, sawiro iyo videos ka Nokia (Symbian) phone in phone Samsung;
Demi xiriirada ka phone Samsung in Nokia (Symbian) phone;
100% content kala iibsiga si degdeg ah oo ammaan ah.
Uable si ay u maareeyaan macluumaadka taleefanka Samsung oo kiniin ah. Kaliya taageertaa wareejinta xogta.
Top Five Android Maareeyayaasha SD Card
Top 10 Android nidaameed Maareeyayaasha si hagaagsan wax kasta oo Device Android
Top 5 Codsiyada Android Free
Isticmaal Lugood, iCloud iyo Wondershare TunesGo in kaabta iPad
Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in Android
> Resource > Transfer > Top 3 Samsung File Transfer Software